China Syringe Production Line Turnkey Project vagadziri uye vanotengesa | IVEN
Iyo yose yekugadzira nzira yeSyringes ine matanho matanhatu makuru:
1. Barrel jekiseni richigadzirisa
4.Mumwe neSirinji Packaging:
2. Barrel scale line kudhinda
6. EO Mbereko
Pane 4S yakakosha mikana yekugovana newe nezve edu michina.
1.Kachengeteka. Michina yedu yakagadzirirwa chidziviriro chekuvhara, kana muchina uchimhanya, butiro rakavharwa, kana butiro rikavhurika, muchina unomira kumhanya, izvo zvinodzivirira mushandi kubva mukukuvara uyezve hakuzove nekusviba kweguruva kusvibisa sirinji mukuita.
2.Stable kumhanya.Kana iwe uchingoronga kumhanyisa muchina maawa masere pakutanga, asi iwe unowana kuwanda uye kuwanda maodha, saka unoronga kuimhanyisa maawa gumi nematanhatu kana makumi maviri nemana pazuva. Ungazviita sei musina muchina wakanaka? Kune edu michina, iwe zvachose hapana chikonzero chekufunganya nezvazvo. Muchina wedu unogona kuramba wakatsiga uchimhanya maawa makumi maviri nemana pazuva. Saka iwe unogona kuita yekuchinja mashifts zvichienderana nezvaunoda. Kana gare gare kunyangwe iwe ukaimhanyisa maawa makumi maviri nemana zvisati zvakaringana kudiwa kwako, zvichikonzera kuti uwane maodha akawanda, tinogamuchirwa kuti uuye kwatiri kwetambo yechipiri kana mutsetse wechitatu.
3.Save mabasa.Sevha mari yevashandi. Zviri zvakazara otomatiki inodzorwa ne PLC. Iyo michina yakabatana pamwechete. Kwete akapatsanurwa. Inogona kuita kudhinda, kuungana mune imwechete yakabatana mutsara. Hapana kudikanwa kwekushanda kuti uite kuchinjisa kana kudhinda kwapera. Yakagadziriswa kudhinda chigadzirwa ichaendeswa kune assemifying muchina otomatiki.
4.Save zvinhu.Mishini yedu ine yakakwira vanokwanisa mwero. Iyo inopfuura 99.9%. Pachave panenge pasina marara iwe. Chimwe chigadzirwa chakakodzera, purofiti yakawanda.
Syringe Scale Line Yekudhinda Muchina & Kubatanidza Mushini
Yakachena Kamuri Sisitimu
Pashure: Bvisa ropa rekuunganidza chubhu turnkey chirimwa
Zvadaro: Kamuri Yakachena